Ukuguquka kwesimo sezulu kubhubhisa izixhobo zamakhorali eJapane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kubhubhisa izixhobo zamakhorali eJapane
I-Los Izixhobo zamakhorali ziyizinhlelo zemvelo ezizwela kakhulu ekuguqulweni kwemvelo. Ukwehluka kukasawoti, ukuminyana kokungcola noma ukwanda kwamazinga okushisa kungathinta umphakathi wamakhorali. Ukuguquka kwesimo sezulu Kuthinta imithombo yamakhorali ngenxa yokwanda kwama-degree amabili emazingeni okushisa aphakathi nendawo wamanzi endawo atholakala kuyo.
Amakhorali asele asengozini yokunyamalala uma lezi zimo ziqhubeka nokuba khona. Amakhorali atholakala esiqhingini sase-Ishigaki esiqhingini sase-Okinawa futhi amenyezelwe njengesiqiwu semvelo. Ine izinhlobo ezingaphezu kuka-70 zamakhorali futhi kubhekwa njengesinye sezixhobo ezindala nezinkulu kunazo zonke engxenyeni esenyakatho.
Ama-coral reef bleach lapho izimo zemvelo zingavumi futhi ziyafa. 97% wamakhorali abakha leli reef bahlanjululwe futhi Ama-56% ashonile. Njengoba izinga lokushisa lamanzi likhuphuka lidalwa ukuguquka kwesimo sezulu nokushisa komhlaba umhlaba umqhele wamakhorali awukwazi ukuzivumelanisa nezinguquko ezinjalo bese uyafa. Ngama-coral, zonke izilwane ezihlobene nazo futhi ezincike kuma-coral ukuze ziphile.
Okudale ukwanda kwamadigri amabili ekushiseni kwamanzi azungezile kube yisimo sezulu esaziwa ngokuthi Umfana. I-El Niño inyusa izinga lokushisa lamanzi angaphezulu kolwandle futhi ibambe iqhaza ekushisweni ngamakhorali. Ukuhlanza kuvela futhi lapho amakhorali ebhekene nezinguquko ezimbi kakhulu kumsoco nokukhanya.
Iqiniso lokuthi amakhorali aqala ukufa kubeka engcupheni inqwaba yezinhlobo zezinhlanzi ezincike emadwaleni ukuze zithole ukudla nezindawo zokucasha. Uma ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuqhubeka ngesilinganiso esiphila ngaso namuhla, izinhlanzi zingase zehle phakathi 10 no-30% ngonyaka ka-2050 ngokuya ngemininingwane ye-IUCN.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kubhubhisa izixhobo zamakhorali eJapane